Ka Jaree Soosaarayaasha Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Ka Jaree Warshad Beddel
GW-12 Dibadda AC HV Kala-Bixinta
GW □ -12outdoor AC HV furitaanka furaha (furida furaha halkaan gaaban) waxaa loo isticmaalaa nidaamka korantada korantada oo lagu qiimeeyo inta jeer ee 50Hz, 12kV danab lagu qiimeeyo, badanaa waxaa loogu talagalay sameynta ama jebinta wareegga hoostiisa iyadoo la raacayo qalabka wax lagu qeybiyo banaanka. Nooca ka-goynta ka-goynta wasakhda ka-hortagga wasakhda ayaa si wax ku ool ah u xallin kara nabarrada wasakhda ah inta lagu jiro hawlgalka si loo buuxiyo shuruudaha isticmaalayaasha aagga aadka u wasakhaysan.
GW9-24 Dibedda AC HV Kala-Bixinta
Taxanaha GW9-24 (W) Is-beddelka ka-goynta Bannaanka HV waa qaab-dhismeed hal cirif ah, kaas oo loo adeegsado furitaanka ama xiritaanka wareegyada hoosta danab laakiin xaalad-culeys la'aan nidaamka 24kV ee korantada bannaanka. Waxay leedahay goonno jiido goonni ah iyo qalab is-qufulka, iyo hawlgalka saamaynta la dahaarka jillaab-ul. Dheeraad dheeri ah, Nooca ka-hortagga wasakhda sunta ayaa si wax ku ool ah u xallin kara flash sababo la xiriira wasakheynta inta lagu jiro hawlgalka furaha ka-goynta si loo qanciyo baahida loo qabo dadka isticmaala aagga si xun u wasakhaysan.
GW5-40.5 ISKU BADALKA
GW5-40.5 biiro ka-goynta korantada sare ee banaanka waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo ama lagu jebiyo wareegga danab sare ee danab lagu qiimeeyay 40.5kV, nidaamka AC 50 / 60Hz. Waxay awood u leedahay inay furto oo xirto awood yar iyo duruufaha istiraatijiyadeed.
GW4-40.5 ISKU BADALKA
Nooca 'GW4 serial high cut off switch switch' wuxuu u hogaansamayaa shuruudaha GB1985-2004 High-voltage AC Kala-Bixiyeyaasha iyo Wareejinta Earthing, IEC62271-102: 2002AC Disconnecting Switches iyo Earthing Switches, iyo IEC60694: 1996 Qodobka Wadajirka ah ee Wareegtada Sarreysa iyo Qalabka Xakamaynta.
GN30-12 (D) Taxanaha Is-beddelka Ka-goynta Korontada Gudaha
GN30-12 (D) furaha goynta waa qalab koronto gudaha ah oo lagu qiimeeyo danab 12kV, seddex waji AC50 / 60Hz. Waxaa loo isticmaalaa in lagu jajabiyo oo lagu wareejiyo hadda qalabka korontada ee HV iyada oo ay jiraan xaalado leh danab iyo culeys la'aan. Bedelaha wuxuu quseeyaa xiriirka wareegaya ee wareegga ah kaas oo si fudud loogu rakibay qalabka shidan Waa
waxay qaadataa gidaarka iyada oo la rakibayo sidoo kale
GN19-12 (C) Taxanaha Is-beddelka Kala-goynta Qalabka Sare ee Gudaha
GN19-12 (C) furaha ka goynta HV ee gudaha wuxuu quseeyaa nidaamka awooda korantada 12kV, AC 50 / 60Hz. Waxaa ku qalabaysan CS6-1 farsamo gacanta lagu shaqeeyo oo waxaa loo isticmaalaa in lagu jebiyo oo lagu sameeyo wareegga iyada oo aan la rarneyn. Waxaa jira nooc wasakheyn dheeri ah, nooca sare-sare iyo nooca tilmaamaya awooda.